महानायक बन्ने अवसर छ ‘प्रचण्डलाई फेरि’ – Khula kura
महानायक बन्ने अवसर छ ‘प्रचण्डलाई फेरि’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केपी ओली पक्ष र प्रचण्डपक्षबीच अन्तरविरोध चर्किएका बेला महेश बस्नेतको भूमिका के होला ? पक्कै पनि उनी प्रचण्ड पक्षलाई भित्तामा पुर्‍याएर एमालेको पुनर्गठन गराउन चाहन्छन् भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । तर, सँग अन्तर्वार्ताका क्रममा सांसद बस्नेत अलि भिन्नैरुपमा प्रस्तुत भए ।
‘मेराबारेमा धेरै भ्रमहरु हुन्छन् । तर, समय र तथ्यहरुले खण्डन गर्दै लगेको छ । पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ र प्रचण्डलगायतको टीमलाई निष्काशनकै तहमा जानुपर्छ भनेर मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन’ बस्नेतले भने, ‘मैले त केपी ओलीपछि अध्यक्ष त प्रचण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने आधारमा धारणा बनाइसकेको थिएँ ।’
त्यसो हुनाले यी दुई दलबीचको एकता अनिवार्य थियो । तर, एकता पछाडि के भयो भने दुईवटा डरले काम गर्‍यो । माओवादीलाई भोलि दीर्घकालसम्म एकता भएन भने छुट्टिन पाउने अधिकारसहित एकता हुनुपर्छ भन्यो । त्यसो भएकाले हरेक ठाउँमा उसले ४० प्रतिशत माग गर्‍यो । तर, वस्तुगत यथार्थको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनमा पनि समानुपातिक भोटमा एमालेले दुई तिहाइ ल्यायो ।
अनि, एकता भयो । अहिलेसम्म नभएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऔं । तर, कमिटी र जनताको बीचको सन्तुलन मिलेन । जनतामा एमालेप्रति बढी आकर्षण छ । त्यसमा पनि केपी ओलीको कारणले यस्तो भयो भन्ने जनताको बुझाइ छ । तर, माथिल्लो कमिटीमा प्रचण्ड कमरेडले एमालेभित्रको गुटबन्दीलाई खेल्न सक्दा उहाँको पक्षमा मूलतः केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा बहुमत भयो । योबीचबाट अन्तरविरोध प्रकट भएको छ, कुनै सैद्धान्तिक कारणले होइन । अब एकताको महाविधेशनसम्म पुग्ने हो । पार्टी प्रक्रियाको मूल भाव पनि यही हो ।
सचिवालयमा प्रचण्ड कमरेडसहित चार नेता एकातिर हुनुहुन्छ । माधव कमरेडलाई पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकार निर्माण प्रक्रियामा दुई अध्यक्ष मिलेर मलाई पेले भन्ने अनुभूति छ । त्यो स्वाभाविक अनुभूति पनि हो । त्यस्तो भएको पनि हो । किनभने, विगतमा माधव कमरेडले पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा केपी कमरेडलाई साथ दिएका धेरै मान्छेहरुलाई आइसोलेसनमा पारियो भन्ने हिसाबमा केही कुरामा आग्रहहरु र तुषहरु प्रकट भएका होलान् ।
त्यही कारणले पनि माधव कमरेडले प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको होला । नारायणकाजी कमरेडले आठ/नौ महिनासम्म भेटघाट नपाएको कुरा गर्नुभएको छ । उहाँमा संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत सोच्ने कमजोरी देखियो । यसबाहेक नेतृत्वमा नपुगेका ईश्वर पोखरेल, बादल र विष्णु पौडेलहरु एकठाउँमा उभिएको देखिन्छ ।
मन्त्रीको जागिर चैट ! प्रचण्ड, माधब नेपाल गुटतर्फ खुट्टो उचालेका
एउटै व्यक्तिलाई एकै समयमा डेङ्गू, कोरोना संक्रमण, मलेरियापछि सर्पले ड’स्यो